Otu esi ehichapụ kuki Google Chrome site na nzọụkwụ | ECommerce ozi ọma
Otu esi ehichapụ kuki site na Google Chrome
N’oge ụfọdụ, mgbe ị na - achọ iji kọmputa gị dozie nsogbu dị na kọmputa gị, mmadụ ga - akwado gị ihichapụ kuki ihe nchọgharị. Ọ bụrụ na ị maghị okwu a, anyị ga-eme ka obi abụọ gị doo anya, n'ihi na ọ bụghị isiokwu ị maara nke ọma.
N'isiokwu a anyị chọrọ dokwuo anya ihe a bit n'ihi na ị n'echiche nke gịnị bụ kuki, ihe mere ọ dị mkpa ka ihicha ha na PC gị na dị ka isiokwu nke post kwuru, anyị ga-agwa gị -esi hichapụ kuki Chrome. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị jiri ihe nchọgharị Google Chrome na-agagharị na ịntanetị, anyị ga-agwa gị otu ị ga-esi kpochapụ kuki.
1 Ka anyi bido na mbido, gini bu kuki?
2 Ugboro ole na ihe kpatara ị ga-eji wepu kuki?
3 Yabụ kedu ka m ga-esi ehichapụ kuki na Google Chrome?
3.1 Ka anyị hụ otu esi ehicha kuki Chrome na PC:
4 Hichapụ kuki Chrome na ekwentị gam akporo ma ọ bụ mbadamba
5 Kedu ihe na - eme ebe nchekwa ihe nchọgharị ahụ? Kwesịrị m ihichapụ ya?
6 Kpochapụ cache nchọgharị
Ka anyi bido na mbido, gini bu kuki?
Na nkenke Kuki bụ obere mpempe ma ọ bụ ngwugwu data nke ezigara na ihe nchọgharị weebụ gị, na nke a na Google Chrome, site na weebụsaịtị ị gara. Obere nchịkọta ndị a nwere ozi gbasara ọrụ gị na ibe ị na-enweta na Internetntanetị na ihe nchọgharị ahụ na-echekwa n'ụdị obere faịlụ ederede.
Ọ dị mma ugbu a Kedu ụdị ozi kuki na-echekwa? Kuki nwere ike ịchekwa ozi metụtara aha njirimara na paswọọdụ, mmasị saịtị ma ọ bụ ọbụlagodi ihe ị gaara ewepụ na ụgbọ ibu azụmahịa gị mgbe ị gara ileta Amazon. Ihu ihe nchọgharị Google Chrome gị, dị ka ọtụtụ ihe nchọgharị ndị ọzọ ejiri na-agagharị na weebụ, chekwaa ma ọ bụ chekwaa data a niile ya mere, ịkwesighi ịbanye ha oge ọ bụla ị gara na saịtị ndị ahụ, nke dị mma n'ezie.
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ha dị ụdị kuki dị iche iche ha na-akpa àgwà n'ụzọ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, enwere kuki ahaziri iji kpochapụ ya na-akpaghị aka oge ọ bụla ị mechiri windo nchọgharị ahụ. E nwekwara ụdị kuki ndị ọzọ emere maka ịchekwa na draịvụ kọmputa gị ruo mgbe ha gafere ma ọ bụ ihichapụ ha.
Ma gịnị kpatara eji akpọ ha kuki, o nwere ihe jikọrọ ya na akpaokwu ahụkuki uba"(kuki ndabara), n’echiche na ha nwere ozi zoro ezo.
Ugboro ole na ihe kpatara ị ga-eji wepu kuki?
Enwere ụfọdụ ikpe ebe ọ bụ ihe amamihe dị ka ihichapụ faịlụ ndị a.
Dịka ọmụmaatụ, ozi echekwara na kuki dị n'ime oghere nwere ike na-ese okwu mgbe ụfọdụ na weebụsaịtị ha na-ezo aka, karịsịa mgbe emelitere weebụsaịtị ahụ n'oge na-adịbeghị anya. Nke a nwere ike ịkpata njehie mgbe ị nwara ịnweta ibe weebụ ahụ ọzọ
na kuki enweghi ozi nkeonwe nke onye ọrụ, Ọ gwụla ma ya onwe ya chọrọ ịgwa weebụ site na ụdị ajụjụ ọ bụla. Ọ bụrụ na o nwere ozi nkeonwe, ọ ezoro ezo.
Yabụ kedu ka m ga-esi ehichapụ kuki na Google Chrome?
Ọ dabara ihichapụ kuki Chrome bụ usoro dị mfe nke na-ewe ihe karịrị nkeji ole na ole iji wuchaa ya. Ọ dị mkpa ikwu, agbanyeghị, usoro ndị edepụtara n'okpuru bụ naanị maka ihe nchọgharị Google Chrome, yabụ ọ bụrụ na ị jiri ihe nchọgharị dị iche, usoro ahụ ga-adị iche.
Ka anyị hụ otu esi ehicha kuki Chrome na PC:
IHE: Buru n’uche na mgbe ihichapụ kuki na Chrome, a ga-emechi nnọkọ nke weebụsaịtị ebe ị debanyere aha gị, Ọzọkwa, enwere ike ihichapụ mmasị gị echekwara. Nke a dị mkpa n'ihi na ọ bụrụ na ịchefu paswọọdụ ịnweta gị, ịnwere ike ịnwe nsogbu ịbanye n'ime saịtị ọkacha mmasị gị.
Na kọmputa gị, mepee ihe nchọgharị Google Chrome.
Ugbu a pịa akara ngosi nwere akara atọ dị larịị nke dị na elu aka nri nke ibe ahụ.
Na onodu menu pịa nhọrọ "Ntọala"
Na ibe nke gosipụtara, pịgharịa gaa na ala wee pịa njikọ "Gosi ntọala dị elu".
Na ngalaba Nzuzo, banye na "ntọala ọdịnaya".
Na ngalaba "Kuki", pịa na "All kuki niile na saịtị niile data ...".
N’okpuru ị ga-ahụ kuki niile nke weebụsaịtị ị gara ịga na nke echekwara na kọmputa gị.
Have nwere nhọrọ iji họrọ kuki ọ bụla ma ọ bụ pịa "Wepụ ihe niile" iji wepu kuki niile na Chrome kpamkpam.
Ugbu a gịnị ma ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ gbochie kuki ịchekwa na kọmputa gị, ihe ị ga - eme bụ ihe ndị a:
Nweta ngalaba "Ntọala" site na ịpị akara ngosi dị na akuku aka nri nke ibe ahụ.
Wee pịa njikọ ahụ "Gosi ntọala dị elu" wee banye na Nzuzo, pịa na "Ntọala Ọdịnaya".
N'ikpeazụ, na ngalaba Kuki, gbanye nhọrọ "Gbochie ntọala data na saịtị" wee pịa "Emela" iji chekwaa mgbanwe ndị ahụ.
Hichapụ kuki Chrome na ekwentị gam akporo ma ọ bụ mbadamba
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ kuki na Google Chrome site na ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ mbadamba gam akporo gị, I nwekwara ike ime ya na usoro dịkwa mfe.
Mepee ngwa Chrome na ngwaọrụ gam akporo gị wee pịa akara ngosi nwere akara ngosi atọ dị na elu n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ.
Na ala nke ihe di n’ime ya, pinye aka na “Mwube”.
Wee pịa na "Nzuzo" ngalaba wee, na ala, pịa na nhọrọ "Clear nchọgharị data".
Na ihuenyo ọzọ ị nwere ike ịhọrọ oge nwere ike ịbụ "Oge Ikpeazụ", "Oge 24 gara aga", "Lastbọchị asaa gara aga", "Izu anọ gara aga" na "Ebe ọ bụ na mgbe niile".
Iji rụchaa, pịa na "Hichapụ niile data".
Ntọala dị elu dị na-enye gị ohere ịhọrọ ihe ihichapụ, gụnyere okwuntughe echekwara, mejupụta data akpaaka, ntọala weebụsaịtị, na ndị ọzọ.
Kedu ihe na - eme ebe nchekwa ihe nchọgharị ahụ? Kwesịrị m ihichapụ ya?
Ugbu a, ka anyị kwuo obere banyere ya ihe nchọgharị na ihe mere o ji dị mkpa wepụ ya mgbe niile. Mgbe anyị na-ezo aka ebe nchekwa ihe nchọgharị, anyị na-ekwu maka ebe dị na draịvụ kọmputa gị, ebe ihe nchọgharị weebụ na-echekwa niile data ibudata na ibe weebụ, ọ bụrụ na onye ọrụ eleta saịtị ahụ ọzọ, ọ dị ngwa ngwa ibudata ibe ahụ.
Oge izizi ịbanye na websaịtị na ,ntanetị, ihe nchọgharị na-elekọta - budata ụfọdụ ihe nrụọrụ weebụ kwuru, dị ka logos, ihe oyiyi, wdg, wee zoo ya.
Ọ na-egosi ihe ndị a na ibe ị na-elele, nke pụtara na maka ibe ọ bụla ị gara, ọ dịghị mkpa ịbugharị ihe ndị ahụ na ibe weebụ. A na-egosipụta ihe ndị a n'otu oge ka a na-echekwa ha na draịvụ ike.
Ugbu a cache nwere oke ịgba, nke enwere ike ịhazi ya. Mgbe ihe nchọgharị ahụ jupụtara, a na-atụfu ihe ndị na-ejighị ya n'otu oge ka ohere dịkwuo. Ya mere, anyị nwere ike ikwu na ebe nchekwa ihe nchọgharị bụ naanị ebe ịchekwa ihe dị na ibe weebụ, n'ụzọ ọ bụla na enweghị mkpa ibudata ha oge ọ bụla ị gara na ibe weebụ.
Kpochapụ cache nchọgharị
Kọwaa ebe nchekwa ihe nchọgharị naanị ihe ọ pụtara bụ ịtọfu ya, yabụ na oge ọzọ ị gara na ibe weebụ, a ga-ebudata ihe niile ọzọ.
Mgbe ụfọdụ ihe na - eme na egosighi ibe weebụ nke ọma, na - eme ka a hụ ihe oyiyi ezughi oke ma ọ bụ n'ebe ezighi ezi.
Nke ahụ bụ mgbe m maara Ọ chọrọ ikpochapụ oghere nchọgharị iji dozie ụdị nsogbu a. Iji hichapụ oghere dị na Chrome, a ga-egosi usoro ị ga - eso n'okpuru:
Nweta Ntọala ihe nchọgharị gị site na akara ngosi atọ dị na nkuku aka nri nke ibe ahụ.
Mgbe ahụ na Nzuzo, pịa na "Clear nchọgharị data" ngalaba.
N'ikpeazụ, n'ime igbe ahụ na-egosi, naanị ị ga-ahụrịrị na ahọpụtara nhọrọ "Ihe oyiyi na ebe nchekwa echekwara na mpaghara".
Ikpochapụ dum cache họrọ oge iche "Mmalite" wee pịa "Clear nchọgharị data".
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Otu esi ehichapụ kuki site na Google Chrome
Kedu ihe bụ PrestaShop?
Gịnị bụ Amazon Premium?